Indlela yokuhlela ukudla okunempilo emndenini
Impilo yabesifazane Ukudla okunempilo
Inqubo yokuhlela ukudla okunempilo ayinzima kakhulu. Isekelwe ezimisweni ezinhlanu kuphela. Uzokudlulisela kalula umndeni wonke ekutheni ukondle kahle, ubheke ngamunye wabo. Ngenxa yalokho, uzoqinisa impilo yakho futhi unikeze isisusa ukuze uzigcine kahle.
Izincomo zokunamathela ngokuqinile ekudleni akuzona nje iziqu zezintandane. Isidingo semvelo sokudla ukudla sigcinwa njalo ngumsebenzi womzimba womuntu ngokwawo. Zonke izinqubo zethu zangaphakathi (ukuphefumula, i-palpitation, ukuhlukaniswa kwamaseli, umsebenzi wesistimu yokugaya) ziyisimo somzimba. Ukudla kuhlinzeka umthwalo ofanayo ohlelweni lokugaya ukudla, okungukuthi, kumele okungenani kube nokudla okungenani 4 ngosuku.
Ukudla "ngehora" kuyasiza kunoma yikuphi ubudala, kodwa ikakhulukazi ukubaluleka kwezingane nentsha. Kukhona ukukhula okusebenzayo komzimba, nokudla okungavamile - lokhu kungumthwalo owengeziwe kanye nomhlabathi ovuthiwe wokuthuthukiswa kwezinkinga zempilo. Izingane emndenini kumele zifundiswe ukudla ngokuvumelana nombuso, ngakho akudingeki ukuthi zichithe amandla ezingenasidingo zokuphila okungadingekile.
Umzimba wethu uhlale udinga izinto ezihlukahlukene zamandla. Kumele sithole kusuka kuma-proteine ​​okudla, ama-carbohydrate, amafutha, amavithamini namaminerali. Ngamunye walezi zinto unemisebenzi yayo. Ukuntuleka kwanoma yiziphi izici kubangela ukwehluleka kwemvelo yonke.
Uma umndeni unabantwana, kubalulekile ukwakha indawo ehlukahlukene yokugcoba. Ingane kufanele ithande ukudla okuhlukene kanye nezitsha ezahlukene. Khona-ke lapho esekhulile kuyoba lula ngaye ukuba ahlele ukudla kwakhe. Ekudleni komndeni, kubalulekile ukufaka imikhiqizo yawo wonke amaqembu - inyama, inhlanzi, ubisi kanye nemifino ngempela.
Ukudla okudliwa ngumuntu phakathi nosuku kumele kugcwalise ukusetshenziswa kwemali emzimbeni wakhe. Esikhathini ngasinye, lezi zikhombisi zingahlukahluka ngokuvumelana nezimo zokuphila, uhlobo lomsebenzi kanye nesimo sempilo yamalungu omndeni. Isibonelo, ukudla nokudla komuntu ohlanganyela ngokwezemidlalo kuhlale ehluke ekudleni kanye nombuso wabantu abangaphansi kweselula. Ukudla ngesikhathi sokugula kuhluke ekudleni nganoma yisiphi isikhathi. Ithebula lehlobo lihlukile etafuleni lasebusika, njll.
Ukudla okwanele kusho ukungabi ngokweqile. Njalo cabangela isimo emndenini wakho, indlela yokuphila yezihlobo zakho, amakhono abo empilo kanye namakhono. Awukwazi ukuphoqa, isibonelo, amajusi emvelo kumyeni ophethwe yisifo se-acid esiphezulu esiswini. Ngisho noma kuyasiza kakhulu. Qaphela futhi uqaphele, uhlele ukudla okunempilo emndenini wakho.
Ukuphepha kokudla kunikezwa izimo ezintathu: ukugcinwa kwemithetho yokuhlanzeka komuntu siqu, ikhono lokuhlukanisa phakathi kokudla okusha nokupheka, ukuphathwa ngokucophelela kwemikhiqizo engajwayelekile. Ngokwesibonelo, kwaziwa ukuthi ukugeza izandla ngaphambi kokudla kuyaziwa ngisho nasezincane ezincane. Kodwa ukwazi akufanele ukufeza. Ngokwezibalo, ukuphazamiseka kwamathumbu kuvame kakhulu kubantu abaneminyaka ehlukene. Yingakho ukwethulwa kokudla okufanele emndenini kufanele kufake ukwakheka kwamakhono ayisisekelo okuhlanzeka.
Ukudla kufanele kube injabulo. Phela, ukuzwa okujabulisayo okuvela ngesikhathi sokudla kunomqondo ojulile wemvelo. Zibonisa ngisho nokuphepha komkhiqizo. Ukunambitheka okungajabulisi okungaqondakali komzimba njengoba isignali yenye uhlobo i-alamu - ayikwazi ukudliwa!
Ikholi yokuthola injabulo ekudleni akuyona ikholi ekugcineni komlingo. Ukuthakazelisa akuveli kakhulu kunani elidliwayo (ngokudla, ngokuphambene nalokho, "libulala" zonke izinhlobo zokuzwa okuthakazelisayo), kodwa ngokukwazi ukuzwa okuthandayo nokumunuka, ukujabulela ukubukeka kwesidlo, njll. Ukuhlukahluka nokunambitheka kwezitsha akuzona ngokuqondile okukhonjwe izindleko zabo. Ukubaluleka okukhulu lapha kunamakhono akho okucubungula kanye nomkhathi wakho wokupheka. Ngokulandela le migomo, uzofaka emndenini wakho umkhuba wokudla okulungile. Ngesikhathi esifanayo, akekho oyozizwa enqatshiwe.
Izakhiwo eziwusizo zama-mushroom ama-shiitake
Inkinga yomhlaba wonke, ingozi kanye nokudla okuwusizo
Iziphuzo ezicima kahle ukoma
Ngihlobo luni lwamanzi okufanele ngiphuze futhi lukhulu kangakanani?
Ukudla kanye nokudla okunempilo ngokuvinjelwa
Izindlela zokuthuthukisa isimo sengqondo nenhlalakahle
Izinzuzo kanye nokulimala ubisi
Izindlela zanamuhla zokuxilongwa nge-reflexology
Silungiselela izingulube ebusika - ukukhethwa kwezindlela zokupheka ezinhle kakhulu
Ukucindezeleka Kwangemva Kwesifo: Ukwelashwa
I-Casserole kusuka kumazambane kanye nenyama enobisi
I-Pesto di Pistachio
Ibhola legolide elincane
Amaqiniso amancane awaziwa futhi esabekayo ngomzimba womuntu
Wedding in style Venetian
Amakhukhi we-oatmeal nge-chocolate, ama-cherry namantongomane
Izinqubo zokuzithokozisa zekhalenda yenyanga
Indlela yokugqoka ingubo ende ngejazi?
Indlela yokuphuza kahle
Ukuvuthwa isanqante cutlets
Izakhiwo eziwusizo ze-valerian ne-lemon balm
Indlela efanele ukukhipha igumbi lezingane